4 ifafaale cimilo dabiici ah | Saadaasha Shabakadda
ka Dhacdooyinka saadaasha hawada soo jiito feejignaanta muuqaalkeeda iyo iyada awood burburin xoog leh dadka iyo dabeecadda labadaba. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhacdooyin taxane ah oo ay aad u yaryihiin dadka intiisa badani waana natiijadaas u gaar ah meeraha oo dhan.
Marka xigta waxaan ku tusi doonaa 4 dhacdo oo saadaasha hawada ah oo sameyn doona afkaagaad kala furaysaa.
1 Hillaac Catatumbo
2 Munaaradaha uumi
3 Duufaanta Supercell
4 Daruuraha Pearly
Dhacdadani waxay ka dhacdaa waddanka Koonfurta Ameerika kana yimid Venezuela waxaana lagu gartaa isku xigxiga silsilado taxane ah si joogto ah. Wixii ifafaale noocan oo kale ah inay dhacaan, daruuro horumar weyn oo toosan ayaa loo baahan yahay oo sameeya dheecaanno koronto oo u dhexeeya 2 ilaa 10 kiilomitir sare.
Aagga Iceland waxaad arki kartaa layaabkan dhabta ah ee dabiiciga ah, kaas oo dhaca goorta dhowr tiir oo uum ah ka soo baxa dhulka karkaraya, kor ugu kaca hawada soo saarta qaabab cajiib ah taasina waxay u oggolaanaysaa dadka soo booqda inay afkooda macno ahaan u furmaan
Duufaantaan laga cabsado loo yaqaan supercell, foomamka xaalado aad u deggan oo dabeylo wata duufaan ahaan. Waxay badanaa ku dhacdaa Bannaanka Weyn ee Mareykanka, gaar ahaan aagga texas. Muuqaal ahaan waa mid aad u cajaa'ib badan oo badanaa leh awood burbur weyn muddadiisa oo dheer awgeed.
ka daruuraha pearl Waxay aad ugu dhufan karaan midabkooda laakiin isla markaa way khatar badan yihiin tan iyo markii la abuuray ee nitric acid. Sidaa darteed, iyagu waa ifafaale runtii qurux badan oo wax baabi'iya oo dabiici ah, waxay ku samaysan yihiin stratosphere heerkulkiisu aad u hooseeyo oo u dhexeeya -50 digrii iyo -80 digrii.
Kuwani waa 4 ee ifafaalaha saadaasha hawada ugu cajaa'ibka iyo cajiibka badan ee laga soo saaro meeraha oo dhan. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay iyaga oo ku raaxee sawirada cajiibka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » 4 dhacdo dabiici ah oo dabiici ah
Daruuraha cirrus, xiisaha badan
Maxay tahay magaalada ugu kulul Spain